ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -28 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 27
ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -29 →
Posted on August 1, 2011 by chitnge
စိတ်နှင့် ဉာဏ်ကို ရှင်းလင်းခြင်း
(ခ) ဒိဋ္ဌိနှင့် ၀ိစိကိစ္ဆာ ပယ်သတ်နည်း
ပုဂ္ဂလိက ဆန္ဒစွဲနှင့်ယှဉ်သော စိတ်မှာ အကုသိုလ် အညစ်အကြေးများ ယှဉ်တွဲနေ၍ မလိုလားအပ်ကြောင်း ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ထိုစိတ်သည် ဒုက္ခတရားကလေးများ အဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာ ရကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပြီ။
ဤနေရာတွင် ထိုဒုက္ခ စိတ်သိကလေး၏ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရှုဉာဏ်နှင့် အတူဖေါ်ပြရပေမည်။ ရှုဉာဏ်ဆိုသည်မှာ ကိလေသာနှင့် ယှဉ်တွဲ ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်၏ ဒုက္ခတရားလေး၏ အလိုကို အလွယ်တကူ မလိုက်မူ၍ ထိုဒုက္ခတရားလေး၏ ဖြစ်ရပ်အမှန်ကို ပညာသားပါပါ ထိုးဖေါက် သုံးသပ် စီစစ်သော စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။
ထိုအခါ ဖေါ်ပြပါ ဒုက္ခ တရားကလေးသည် ၎င်း၏ သဘာဝ ဓမ္မအတိုင်း ပျင်စီးသွားခြင်း၏ အဖြစ်ကို ဉာဏ်သက်ဝင် မိပေမည်။ ထိုဉာဏ်ကို ရသည်နှင့် တပြိုင်နက် ၎င်းဉာဏ်အသိသဘောကို လက်မလွတ်ဘဲ ဖြစ်ပေါ်သိရှိလာသမျှတို့အား – – –
အော် . . . ဤအချင်းအရာကလေးများသည် ဒုက္ခတရားကလေးများ ဖြစ်ကြ၏။ ဤဒုက္ခတရား ကလေးများသည် မမြဲကြ အနိစ္စ သဘာဝရှိသည်။ အပျက်တရားကလေးများ ဖြစ်သည်ဟု ရှုသတ်ဆင်ခြင်ရမည်။
ထိုအခါ ရှုသတ်နေသော ဉာဏ်ပညာ၏ အောက်ဝယ် အဆိုပါ ဒုက္ခတရား ကလေးများသည် အမှန်တကယ်ပျက်စီးသွားကြပေမည်။ ထိုအခါ . . .
အော် . . . ဤအချင်းအရာကလေးများအား ပိုင်ဆိုင်လို၍ မဖြစ်နိုင်ပါတကား။ ၎င်းတို့သည် အပျက်တရားကလေးများသာဖြစ်၍ ထိုအပျက်တရားကလေးများကို ဟန့်တားနိုင်ခြင်း၊ လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း မရှိပါတကားဟူ၍ သုံးသပ်ရမည်။
ဤသို့ သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် အဇ္ဈတ္တ ရုပ်နာမ်တို့၏ ဒုက္ခသဘော မမြဲခြင်းသဘော မပိုင်ဆိုင်ခြင်းသဘောတို့ကို အထပ်ထပ် ဆင်ခြင်မိလျှက် ဒိဋ္ဌိပြုတ်ကာ ယုံမှားကင်းကွာလျှက် ဉာဏ်သဘောကို သိသာထင်ရှားစွာ ထိုးထွင်းဆင်ခြင်နိုင်မည် ဖြစ်လေသည်။
စိတ်သည် ကိလေသာ သဘောများ ယှဉ်တွဲကပ်ငြိနေ၍ ထုံထိုင်း၊ မှုံမှိုင်း သောသဘော လေးလံသော မကြည်မလင်သောသဘော ခန္ဓာကိုယ် အလိုလိုက်ချင်သောသဘောများရှိသည်။ ဉာဏ်သည်ကြည်လင် ရွှင်လန်းသောသဘော သန့်စင်သောသဘော ထိုးထွင်းဆင်ခြင်သော သဘောများရှိသည်။
ကိလေသာ တရားများနှင့် ယှဉ်တွဲနေသော စိတ်သည် အကုသိုလ်တရားများကို အဖေါ်လုပ်၍ တွေးတောလိုက်သဖြင့် အ၀ိဇ္ဇာတည်းဟူသော မသိမှုမှ ပေါ်ပေါက်လာကာ အမှန်တရား ဖုံးကွယ်သွားလေသည်။
စိတ်သည် ကိလေသာတရားများနှင့် ပူးပေါင်းလိုက်သဖြင့် အမှန်တရားကို မသိ၊ ထိုသို့ အမှန်ကို မသိသောစိတ်သည် သူ၏ ပင်ကိုယ်သတ္တိကလေးဖြင့် ကြံဆလိုက်သောအခါ အမှန်တရားသည် ပို၍ပို၍ ကွယ်ပျောက်သွားရလေတော့သည်။
ထို့ကြောင့် အမှန်တရား မကွယ်ပျောက်လိုသူတို့သည် ရင်တွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာသော တွေးတောကြံဆ စိတ်များကို လက္ခဏာရေးသုံးပါးဖြင့် ဆေးကြော စီစစ် သန့်ရှင်းစေရမည်။ ဤကဲ့သို့သော တခုတည်းသော နည်းနိသျှဖြင့် စိတ်ဓာတ်များ အညစ်အကြေး ကင်းစင်ရန်၎င်း၊ ကိလေသာတရားများ လျော့ပါးရန်၎င်း၊ အမှတ်စွဲ အယူလွဲမှားမှုများ ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းစေရန်၎င်း၊ ကျင့်ဆောင်နိုင်ပေသည် ။ အချုပ်အားဖြင့် . . .
ပေါ်စိတ်ကို အလိုမလိုက်ဘဲ အနိစ္စရှုပါ ဟူသတည်း။
ဤနည်းဖြင့် ပုဂ္ဂလိက ဆန္ဒစွဲများ လျော့နည်း ခေါင်းပါးကင်စင်သွားလျှက် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျသော အသိအမြင် အဆုံးအဖြတ်များကို ပိုင်ဆိုင်လာပါလိမ့်မည်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဉာဏ်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ, ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်. Bookmark the permalink.